गर्भवती महिलाको गर्भमा भएको बच्चामा कोरोना सर्छ कि सर्दैन ? « Salleri Khabar
गर्भवती महिलाको गर्भमा भएको बच्चामा कोरोना सर्छ कि सर्दैन ?
१३ भदाै, काठमाडाैँ । गर्भवती महिलालाई कोरोना सङ्क्रमण भए पनि पेटको नानी (भ्रूण)मा सङ्क्रमण सर्ने जोखिम न्यून हुन्छ । यद्यपि, प्रसूतिपछि भने सङ्क्रमित आमाबाट बच्चामा भाइरस सर्ने जोखिम रहने हुनाले सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।